🥇 ▷ Waad ka arki kartaa biraawsarkaaga Apple TV + bogga shabakadda ✅
Waad ka arki kartaa biraawsarkaaga Apple TV + bogga shabakadda
Waa wax macquul ah inaad ka fekerto si aad u aragto Apple TV + waxaad u baahan tahay ama aalado Apple ama aalado la jaan qaadaya sida Samsung TV TV-yada qaar ka mid ah. Laakiin ka waran adeegsadayaashaas Wax alaab ah kama hayno Apple Laakiin waxaan rabnaa inaan ku raaxeysto adeegga?
Apple qoraalkii ugu dambeeyay wuxuu xaqiijiyey in adeegga Waxaan lahaan lahaa bog war weyn maxaa yeelay tani waxay furtay suurtagalnimada in iyada oo loo marayo biraawsar aan ku shaqeyneyn aaladda Apple Aan ku soo saarno nuxurka.
Sidaas ayey noqon doontaa, maxaa yeelay mahadii ku duugan barnaamijka Apple waxaan arki karnaa Apple TV + Safari, Chrome iyo Firefox. Dabcan ahaanshaha daalacashada internetka waxaan arki karnaa waxa ka baxsan aaladda Apple. Dhaqdhaqaaq aad ugu eg waxa uu ku sameeyay Apple Music, kaas oo sidoo kale lagu socodsiin karo degel deg deg ah.
U fiirso Apple TV + biraawsarkaaga bilaa bilaa faa iidada ah
URLka su’aasha la weydiinayaa wuxuu noqon doonaa tv.apple.com sidoo kale rukumi doonaa Waxaan ka arki karnaa waxyaabaha aan rabno. Dabcan maahan habka ugu fican ee lagu sameeyo, maadaama ay aad uga sii dhib badnaan doonto in adeeggan lagu isticmaalo qalab Apple ku habboon. Laakiin waa wax aad u wanaagsan in shirkaddu go’aansatay inay Apple TV u furto isticmaaleyaal badan.
Apple TV + ayaa imaan doona Nofeembar 1, oo gaadhay in kabadan 100 dal iyo gobol. Adeeggu wuxuu si tartiib tartiib ah u bixin doonaa marka lagu daro barnaamijyada telefishanka ee asalka ah iyo taxanaha ” arag ” ” ‘ Apple TV + ayaa bixin doona 4.99 yuuro bishii bil kasta oo la qorsheeyo qoyska, Markaa waxay dharbaaxo cad u tahay tartankaaga tooska ah: Netflix, Disney + iyo HBO.
Marka lagu daro adeegga websaydhka waxaan sidoo kale u isticmaali karnaa barnaamijka TV-ga + barnaamijyada aan ka soo qaadanno iPad, iPhone, Mac iyo Apple TV. Tani waa mid ka mid ah qodobbada ugu adag ee adeegga ee soo socda ka dib abuurista deegaanka si caan ah oo Apple It ay dhistay; Awood u lahaanshaha ku raaxeysiga dhammaan adeegyadeena meel kasta iyo si kasta oo shaki la’aan ah waxay dhiirigelin weyn u noqon doontaa dadka isticmaala.